Mashaariicda Arduino - Ikkaro
Arduino waa madal Qalab Bilaash ah, calamada Open Hardware. Waxaan jeclahay inaan ka fikiro guddiga arduino sida maskaxda xukunta dhamaan mashaariicdeena. Xaqiiqdii waa microcontroller noo ogolaanaya inaan la falgalno dareemayaal kala duwan oo kala duwan si aan u aqoonsanno adduunka una abuurno ikhtiraac iyo aalado.
Illaa iyo hadda, haddii aan dooneyno wax la mid ah waa inaan qaadanno PIC, kaarka barnaamijyada oo aan soo ururinno wareeggayaga. Arduino, aan dhahno way siisay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan bulshada weyn ee ka agdhow oo leh dukumiinti qof walba iyo kumanaan, tobanaan iyo kumanaan mashruuc oo la qabtay oo la heli karo oo lagu dhisi karo, lagu horumarin karo laguna baran karo, waxay barakicisay barnaamijyadi hore, gaar ahaan kuwa ugu cusub. Arduino wuxuu u oggolaaday soo gelitaanka raxan taageerayaal elektiroonig ah.
Waxaan ka hadli doonnaa mashaariic gaar ah oo aan ugu adeegsan doonno Arduino tijaabooyinka gurigeenna iyo kan Mashaariicda DIY
Maqaalkan waxaan ku sharaxayaa sida loo xaliyo qaladka guud ee Arduino: avrdude: ser_open (): ma furi karo aaladda «/ dev / ttyACM0»: Ogolaansho… Akhri akhriska
Shaqada badan ee Arduino iyo maaraynta waqtiga
Anigu ma ihi khabiir Arduino, in kasta oo aan haysto saxanka muddo dheer haddana si dhib leh ayaan u baaray. Waqtiyadii aan u adeegsaday waxay ahayd sidii nuqul qalab koobiyeynta iyo dhajinta horeba loo abuuray laakiin iyada oo aan xiiso badan loo haynin runtii barashada sida ay u shaqeyso laakiin si fudud iyadoo ujeedadu tahay inaan ka dhigo mid waxtar leh oo aniga waxtar ii leh. Kirismaskan waxaan xoogaa kula jaanqaaday goobta dhalashadiisa qaar ka mid ah laydhadhka 'LED' iyo aaladda 'HC-SR04 ultrasound sensor'. Waana istaagay si aan u fiirsado waxa ay ahayd in la sameeyo.
Kaliya waxaan rabay inaan sameeyo waxyaabo kala duwan oo leh laba Laydh oo ka soo baxa isla calaamadda. Ceeb. Waxaan si dhakhso leh ugu turunturooday waxaan u maleynayo inay noqon doonaan mid ka mid ah xaddidaadaha ugu horreeya ee aad la kulanto markii aad bilowdo inaad ku dhex milicsato Arduino. Oo uma baahnid inaad ka dhigto mid aad u adag. Kaliya waxaan ka hadlayaa laydhadhka qaar, waxaad ogaatay inaadan si sax ah u sameyn karin waxaad rabto.
Aynu si cad u bilowno shaqo badan kuma jiraan Arduino, laba shaqo laguma socodsiin karo is barbar socda. Laakiin waxaa jira farsamooyin si wicitaanno degdeg ah loogu yeero oo ay umuuqdaan inay si wadajir ah u shaqeeyaan.
Waxaan u sheegayaa kiiska si faahfaahsan. Kirismaska ​​waxaan dhigay Muuqaalka dhalashada waxaanan doonayay nalalka dhalashada qaarkood inay soo baxaan markay gabdhahaygu soo dhowaadaan. Waxba kakan. Waxaan kaliya rabay laba laamood oo laydhadh horseed ah inay si kala duwan ugu shaqeeyaan qiyamka dareemaha dhawaanshaha.
Sida loo sameeyo robot guri lagu sameeyo oo leh Arduino
Qodobkaan waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo a aaladaha yaryar ee guryaha lagu sameeyo oo ay maamusho guddiga Arduino. Ujeedada robotku waxay noqon doontaa in laga fogaado caqabadaha iyadoo la adeegsanayo qalabka 'ultrasound sensor', markay gaarto carqalad waxay eegi doontaa labada dhinac waxayna go'aamin doontaa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu sii wadi karo socodkiisa
Qeybtan koowaad waxaan diiradda saari doonnaa dhismaha mashiinka aaladaha, isu-keenidda qaybaha iyo isku xirka.
Xakamaynta Servomotors leh PWM iyo Arduino
Waxaan horey ugu soo bandhignay barta Arduino (https://www.ikkaro.com/Tutoriales-basicos-arduino) oo runtiina waxay ka muuqdaan dhowr mashruuc oo uu ka mid yahay kan (https://www.ikkaro.com/node/529)
Hadda aan in yar sii socono oo aan yeelno ku beddelo calaamadaha ballaca garaaca wadnaha (PWM), Tan waxaa loo isticmaali karaa tusaale ahaan in lagu maareeyo mootooyinka adeegga sida kuwa halkan lagu soo bandhigay (https://www.ikkaro.com/node/741) ama rgb leds dhexdooda. Kuwa aan garanaynin waxa PWM yahay, waa qalabayn lagu sameeyo calaamadda oo u adeegta "gudbinta macluumaadka marinka isgaarsiinta ama xakamaynta xaddiga tamarta ee loo dirayo rar" (Wikipedia)
Waa maxay Arduino
Waxaan eegay mashaariic lagu sameeyay Arduino, sidaas ayaan u xiiseynayay waxa tani ku saabsan tahay Arduino oo waxaan raadiyey xoogaa macluumaad ah oo shabakadda ah.
Arduino waa barxad qalab furan oo furan oo ku saleysan guddi fudud oo I / O ah iyo bey'ad horumarineed oo hirgelisa luuqadda barnaamijka Processing / Fiilooyinka. Arduino waxaa loo isticmaali karaa in lagu horumariyo walxaha is-dhexgalka iswada ama waxay ku xirnaan kartaa barnaamijka kombiyuutarka